သုံးစွဲသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းပြောဆိုနေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည် Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, စက်တင်ဘာလ 6, 2009 သောကြာနေ့, ဇန်နဝါရီလ 6, 2017 Douglas Karr
မနေ့ကအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ရဲ့ Clint Page ကိုအင်တာဗျူးရတာကျွန်တော်ပျော်ခဲ့တယ် Dotster, လူမှုမီဒီယာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လာ။ ကျွန်ုပ်သည် Dotster ကိုနှစ်သက်သူအဖြစ် ၇ နှစ်ရှိပြီးအိပ်မက်ဆိုးအကြောင်းကြားရသောအခါကုမ္ပဏီအားကျွန်ုပ်၏တန်ဖိုးထားလေးမြတ်မှုကိုထပ်မံအတည်ပြုခဲ့သည် အခြားမှတ်ပုံတင်သူများဝန်ဆောင်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ သူတို့ရဲ့ဖောက်သည်အပေါ်ပြုကြရန်တွန်းအားပေးခဲ့ကြသည်။
၂၀၀၉ သည်ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏နှစ်ဖြစ်သည် Dotster အတွက်။ Dotster သည်ဆိုရှယ်မီဒီယာအဖွဲ့ကိုတိုးချဲ့ပြီးငှားရမ်းခဲ့ပြီးရလဒ်များမှာထူးခြားသည်။ Dotster သည်တိုင်းတာရန်နည်းလမ်းများကိုပင်တီထွင်နိုင်ခဲ့သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လာ ၎င်း၏အားထုတ်မှုသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီမြင်နေသည် အသစ်သောဖောက်သည်လေးလည်းအတွက်တိုးတက်မှုနှုန်းအပေါ်ရရှိမှု ဖောက်သည်များ၏ retention ကိုနှင့်ပင် ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချ.
ဖောက်သည်တွေကငါတို့အကြောင်းပြောနေတာကိုငါတို့သိတယ် အဲဒီစကားဝိုင်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်"Clint ကဆိုသည်။
Dotster သည်စကားပြောခြင်းနှင့်အခွင့်အလမ်းများစွာရရှိခြင်းဖြစ်သည် တွစ်တာ။ စကားဝိုင်းများသည်အဓိကအားဖြင့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုပြissuesနာများကိုအဓိကထားသည်။ ထို့ကြောင့် Dotster သည်မေးခွန်းများကိုတုံ့ပြန်ရန်သာမကသူတို့၏ထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုတိုးတက်စေရန်အတွက်သုံးစွဲသူ၏သွင်းအားစုများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ခဲ့သည်။
၀ န်ဆောင်မှုများတိုးပွားလာသည်။ သို့သော် Clint ကဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့် ပတ်သက်၍ အကြီးမားဆုံးသောအတွေ့အကြုံမှာဖောက်သည်များသည်ဖောက်သည်ထောက်ခံသူများဖြစ်လာသည်ကိုစောင့်ကြည့်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ Dotster ကသူတို့၏ဖောက်သည်များကကုမ္ပဏီကိုတိုးတက်စေရုံသာမက ၀ ယ်သူအားလည်းကူညီပေးသောကြောင့်သူတို့ကိုကူညီလိုကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ တစ်ခါတစ်ရံဆိုရှယ်မီဒီယာအဖွဲ့သည်ဖောက်သည်များကိုထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စေခဲ့သည် - ထိုဖောက်သည်များသည်ထိုကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီကြီးမှတစ်စုံတစ် ဦး ကိုလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဦး နှင့်ဆက်သွယ်မည်ဟုမထင်ခဲ့ကြပါ။
ဖောက်သည်များနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအလုပ်လုပ်သည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ၄ င်း၏တန်ဖိုးမြှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကြီးထွားလာသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့၏ဒိုမိန်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုကျော်လွန်လိမ့်မည်ဟုသူတို့ယုံကြည်ကြသည်။ အပို ၀ န်ဆောင်မှုများသည်သုံးစွဲသူများသည်အခြားနေရာများတွင်ရရန်ရှိသော်လည်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းအားဖြင့်ဖောက်သည်များ၏ကျဆင်းမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ သို့သော် Dotster ၏ထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများမှတဆင့်ရယူနိုင်သည်။
Clint ကကုမ္ပဏီအနေဖြင့် Dotster သုံးစွဲသူအသိုင်းအ ၀ ိုင်း၏စုပေါင်းထောက်လှမ်းရေးကိုအသုံးချနိုင်ခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ Dotster အသုံးပြုသူအသိုင်းအဝိုင်းအသုံးချ
Dotster လူမှုရေးကွန်ရက်အသုံးပြုမှုကိုတိုးချဲ့ခဲ့ပြီးမကြာသေးမီက Next Big Small Business ဟုခေါ်သည့်ကြီးမားသောဗီဒီယိုကင်ပိန်းနှင့်အတူ ပြိုင်ပွဲတွင်ဖောက်သည်များကသူတို့၏စီးပွားရေးနှင့် Dotster အသုံးပြုမှုအကြောင်း ၂ မိနစ်ကြာဗီဒီယိုတင်ရန်လိုအပ်သည်။ သတင်းစာကြီးများ မှလွဲ၍ Grand Prize ဆုရှင်သည်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ရရှိခဲ့ပြီးဒုတိယဆုမှာဒေါ်လာ ၅၀၀ ဖြစ်သည်။ တတိယဆုကိုဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုချီးမြှင့်ခြင်းဖြစ်ပြီးနောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၂၀ ကိုဒေါ်လာ ၅၀ ပေးခဲ့သည်။ သင်ထပ်မံပေါင်းထည့်လိုက်လျှင် Dotster သည်ဒေါ်လာ ၂၅၀၀ ဖြင့်စုဆောင်းထားသောကြီးကျယ်သောဇာတ်လမ်းများကိုစဉ်းစားပါ။ မဆိုးပါဘူး!
Dotster က ၄ င်းတို့သည်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ကျွမ်းကျင်သူများမဟုတ်ကြောင်း - လမ်းတစ်လျှောက်တွင်အချို့သောအမှားများကျူးလွန်ခဲ့သည်။ ပို။ အရေးကြီးသည်မှာသူတို့ဖြစ်ကြသည် ယုံကြည်သူများ လူမှုမီဒီယာထဲမှာ! ဖောက်သည်များအနေဖြင့် Dotster အားအရာများကိုပြုပြင်ရန်တောင်းဆိုသည်။ သူတို့သည်လျင်မြန်စွာတုန့်ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်ချက်များကိုနားထောင်ပါကအောင်မြင်လိမ့်မည်။ သူတို့မလုပ်ဘူးဆိုရင်သူတို့က Clint ခေါ်တဲ့အရာကိုဖန်တီးကြတယ် သတင်းအချက်အလက်လေဟာနယ် - ကျန်သူတစ် ဦး ကကျန်သည့်နေရာကိုဖြည့်လိမ့်မည်။
Clint သည်လူမှုမီဒီယာဒိုင်ခွက်တစ်ခုကိုသူနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ အစီရင်ခံစာသည်အပျက်သဘောမှတ်ချက်များ၊ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်တစ် ဦး ကသူ၏ကုမ္ပဏီ၏လူမှုမီဒီယာကျန်းမာရေးကိုနေ့စဉ်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းသည်သေချာစေရန်သေချာစေမည်ဟုစိတ် ၀ င်စားပါသည်။ ၎င်းသည်သင်၏ကုမ္ပဏီအကောင်အထည်ဖော်သင့်သောဒိုင်ခွက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
Dotster သည်ဒိုမိန်းမှတ်ပုံတင်သူမှအနည်းငယ်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးကုမ္ပဏီများကို hosting, site design, development နှင့် content management system များကိုပေးသည်။ Dotster သည် Dotster Connect ကိုကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏လူမှုရေးကွန်ယက်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။ သူတို့ကလူမှုရေးမီဒီယာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်တွက်ချက်မှုအတွက်စိတ်ကူးကောင်းတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေလည်းရေးထားတယ်။
လူမှုကွန်ရက်များတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြန်ရရန်အခွင့်အလမ်းများစွာကို Dotster ကထောက်ပြသည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ပရိုမိုးရှင်းများနှင့် ပတ်သက်၍:
Call Center ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချပါ
ပြီးတော့ Dotster ကကော်ပိုရေးရှင်းတွေကိုဆိုရှယ်မီဒီယာနည်းပညာတွေကိုပြည်တွင်းမှာအသုံးချဖို့တိုက်တွန်းတယ်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအားဖြည့်တဲ့အခါမှာအကျိုးရလဒ်တွေရှိတယ်။ ဥပမာအချို့ -
Help Desk overhead ကိုလျှော့ချပါ
အကောင်းဆုံးမှာ Dotster သည်ဖောက်သည်များ၏သစ္စာရှိမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှပြန်လည်အကျိုးအမြတ်ကိုတိုင်းတာနိုင်သည်။
ဖောက်သည် retention ကိုတိုးတက်စေ
သုတေသန / ​​စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုန်ကျစရိတ်များကိုလျှော့ချပါ
အသုံးပြုသူအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့် Dotster Connect အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက Dotster Connect ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားပါသို့မဟုတ် 360-449-5900 ကိုခေါ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် Dotster ၏အကြံဥာဏ် ၁၅ ခုကိုအောင်မြင်သောအသိုင်းအ ၀ ိုင်းအတွက်အကြံပေးလိုပါသည်။
မှဓာတ်ပုံ Dotster အပေါ်လက်ပံစီးပွားရေးဂျာနယ်ရဲ့ဆောင်းပါး.
Tags: ဆိုင်ကယ်တာယာတိုက်ရိုက်clint စာမျက်နှာပြိုင်ပွဲdotsterလူမှုမီဒီယာဆိုရှယ်မီဒီယာပြိုင်ပွဲထောက်ခံစာyoutube ပြိုင်ပွဲ
Dummies - ကျန်တဲ့ငါတို့အတွက်လမ်းညွှန်တစ်ခု။
သင်၏ WordPress ဘလော့သည်ပရင်တာနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိပါသလား။